Free YouTube Music Player - Play YouTube Videos Dị ka Songs
> Resource> YouTube> YouTube Music Player - Play YouTube Videos Dị ka Songs
Ọ bụrụ na ị chọrọ ibudata music si YouTube na efu àgwà ọnwụ, ị kwesịrị ị na-agbalị a usoro mgbe nyefee ebudatara music ka iTunes n'ihi na mma management. Mụtakwuo >>
Nso nso a, Google ka a tọhapụrụ Google Music ọrụ, na-azọrọ bulite ruo 20,000 gị songs for free. Ma, ya na YouTube music ọkpụkpọ dị ka Muziic, ị na-etinye YouTube si ọtụtụ nde music videos na gị na desktọọpụ, free na legally.This Isiokwu a ga-ewebata free YouTube music ọkpụkpọ - Muziic.
Chọọ YouTube Mepụta Playlist
Ndị kasị ibu n'ụwa music nchekwa data bụ ugbu a na gị fingertips. Nanị ọsọ ọsọ aha nke song ma ọ bụ na-ese na search igbe, na n'otu ntabi-esi kasị mkpa results na pụrụ n'ụzọ dị mfe atụkwasịkwara gị playlist na otu Pịa. Full playlist management dị, gụnyere na-azọpụta, loading, ịkpọgharịa play, doro anya, wdg .
E nwekwara tọn listi ọkpụkpọ na-akọrọ ndị ọzọ na nke ka ọ dịkwuo mfe ike gị YouTube playlist. Ọzọkwa ịkọrọ gị music playlist na ndị ọzọ. BTW, na "autotweet" atụmatụ, na-ahapụ gị kọọrọ ndị enyi gị ihe ị na-ege ntị.
Ịtụnanya Sound Ogo
Muziic obụrede mbụre ndị kasị elu ụda àgwà maka YouTube video playback site n'inye zuru stereo nhọrọ.
Na-ege ntị YouTube Music na Lyric
Ọ dịghị ihe ọzọ chọta lyric gburugburu web. Otu pịa na-ele lyrics on Muziic.com. Ọ bụ na-ezi ụzọ ahụ na-ekpo ọkụ music site Top Lyrics atụmatụ.
Chọpụta Ọtụtụ puku ndị Radio Stations
Muziic bụghị nanị a YouTube music ọkpụkpọ, kamakwa a redio ọkpụkpọ. A na nso redio ndekọ a gụnyere, ekpuchi mgbe edemede dị ka n'elu, Pop, Rock, Hip iwuli elu, Country, R & B, wdg
Na-ege ntị YouTube Music n'ebe ọ bụla
Muziic ewe YouTube music na gị n'ebe ọ bụla. Web music ọkpụkpọ, desktọọpụ music ọkpụkpọ na mobile music ọkpụkpọ niile bụ free na-enwe.
Download Muziic YouTube ọkpụkpọ ebe a >>
Record your mixes ka MP3 na High Quality
Muziic arụ YouTube music na-aga n'ihu site overlapping Usoro. Ma ị na-echere na a ngwa ngwa na netwọk. Iji mma enwe gị Google Music, ị nwere ike Record YouTube ka MP3 ndekọ YouTube ka MP3 na mbubata Obodo faịlụ ka Wondershare Player. Ọ dịghị buffering ugbu a.
Gịnị bụ YouTube Music na Mee YouTube dị ka Personal Music Isi Iyi